Samsung sy LG ve manondro ny fanafoanana ny mpandefa amin'ny Android N? | Androidsis
Hivoaka tanteraka amin'ny vatasarihana fampiharana toa ny Samsung sy LG ve ny Android N?
Manuel Ramirez | | About us
Tao anatin'ireo andro maromaro nanaovana ny Mobile World Congress dia nahagaga zavatra tsy ampoizina izahay. Avy amin'ny Fakan-tsarimihetsika modular voalohany an'ny LG miaraka amin'ny G5, ny fahatongavan'i andiany vaovao ho an'i Sony izany dia hihevitra ny fialamboly avo lenta hamela ny Z6 na inona ity Xiaomi Mi 5 mahavariana ity natolotra androany maraina lasa izany tamin'ny fisintomana ireo telefaona hafa natolotra tamin'ny andro lasa teo. Ny zava-misy virtoaly dia tanjona iray napetraky ny mpanamboatra maro toa ny LG, HTC, Facebook na Samsung, izay manalavitra antsika amin'ny fampisehoana mifantoka indrindra amin'ny finday avo lenta toa an'i Hugo Barra, izay tao anatin'ny adiny iray sy sasany dia nahagaga antsika ny kalitao. an'io Mi 5 io raha ny hafa kosa mieritreritra "kilalao" ho an'ny avo lenta.
Ny fametrahana an'izany rehetra izany ary hitodika any amin'ireo tsy ampoizina hitantsika andro lasa izay, dia fantatsika izany mety misy Android N tsy misy mpandefa fampiharana na ilay mpandefa launcher mahazatra. Tsaho iray mahagaga nefa izany dia tsy lavitra ny votoatiny ao anatiny, mety hitranga amin'ny farany mety tsy izany. Fa ny zava-mitranga dia hitantsika tao amin'ny Galaxy S7 sy LG G5 ny fanjavonan'io mpandefa fampiharana io izay efa teo hatrizay niaraka taminay. Fampitandremana ka rehefa amin'ny Google I / O 2016 manaraka dia tsy hahagaga isika rehefa manambara i Google fa ny famerenana ny Android manaraka dia hanafoana ny safidy fampiasana ilay mpandefa izay efa nahazatra ny maro amintsika.
1 Veloma mpandefa, veloma
2 Ho avy tsara ho an'ny Nova Launcher?
Veloma mpandefa, veloma
Ao amin'ny LG G5 dia tao no nahafahantsika nanaitra bebe kokoa ny tenantsika, nanomboka raha tsy izany dia nanjavona tanteraka ity safidy ity. Raha ao amin'ny Galaxy S7 dia misy mpandefa, na dia azo afenina amin'ny toerana miafina ao amin'ny terminal aza. Raha mikaroka ao amin'ny faritra "Samsung Labs" ny mpampiasa iray dia hita io safidy io hamafana ilay vatasarihana fampiharana mba hananan'ny mpampiasa fampirimana amin'ny birao izay tena ampiasainy isan'andro.
Terminal iray hafa izay handalo tanteraka ity safidy ity Izy io dia ny HTC One X9, na dia misy aza ny fametrahana azy hahafahana mampandeha azy raha toa ka tsy afaka miaina tsy misy izany ny mpampiasa. Raha mijery ny safidy hafa toa ny rindrambaiko isika, ao amin'ilay "Concept for Marshmallow" izay nohafarana dia misy aza ny mety hialana amin'ilay mpandefa raha maniry.
Ary tsara, efa fantatsika ny fomba fironana mazàna manaraka azy daholo ny olona amin'ny farany. Tsy mila mahita ireo zorony boribory fotsiny isika, ka ny ankamaroan'ny terminal efa natolotra dia manana ireo fiolahana ireo eo an-joron'izy ireo.
Ho avy tsara ho an'ny Nova Launcher?
Efa misy mpampiasa maro izay tsy manahy ny amin'ny fanjavonan'ny mpandefa na ny mpandefa fampiharana amin'ny Android. Manana safidy hafa tena tsara izahay Nova Launcher dia aseho ho iray amin'ireo tsara indrindra izao dia izao. Mpandefa fampiharana avo lenta, namboarina tena tsara ary mandeha amin'ny tifitra vita miaraka amin'ny tanjony tsy misy fireharehana be loatra. Azo antoka fa hahita fanovana vitsivitsy ao aminy isika mba hifanaraka amin'ireo fotoana vaovao, saingy tokony ho fantatrao ihany koa fa mpampiasa an'arivony maro izay lasa zatra ny mpandefa azy no halefa haka izany.
Tsy gaga amin'ity fanjavonana ity koa izahay, satria ny iray amin'ireo antony nahatongavan'i Material Design, efa roa taona amin'ity fiteny famolavolana ity dia ny firaisan-kina eo amin'ireo takelaka sy fampiharana mihintsy amin'ny Android. Ny fanesorana ny mpandefa dia mamela isaky ny mitovy ny telefaona samihafa eo anelanelan'izy ireo ka zavatra itovizany io, na dia eo amin'ny lalana hafa mihitsy aza isika ho an'ny niavian'ny Android taona vitsy lasa izay, fahaiza-manao lehibe ho an'ny fanaingoana.
Izahay koa ao amin'ny Android izay vao mainka misambotra mpampiasa Apple maty paika kokoa, Ka noho izany ny fananana fiteny famolavolana tokana izay manolo-tena hanolotra traikefa ho an'ny mpampiasa, toy ny nitranga hatramin'ny Android 5.0 Lollipop, dia nofinofin'ireo bandy ao amin'ny Google.
Na izany aza, dia hahita fanovana lehibe eo amin'ny interface Android isika amin'ity taona ity, nanomboka Marshmallow dia tetezana kokoa izay namboarina ny olan'ny fahombiazana matotra sy ny fanatsarana bateria. Tonga izao ny fotoana ho an'ny vaovao maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Hivoaka tanteraka amin'ny vatasarihana fampiharana toa ny Samsung sy LG ve ny Android N?
Janus dia hoy izy:
fa ny nanjavona dia ilay drawer app fa tsy ilay launcher. Tsia?
Mamaly an'i Janus
Manuel Ramirez dia hoy izy:
Azo antoka, ilay vatasarihana. Azonao atao ny mametaka launcher hafa foana!
Valiny tamin'i Manuel Ramírez
gsuacom dia hoy izy:
Mamaly an'i gsuacom
fdorc dia hoy izy:
Ary tsy ny Android N no mitondra safidy hanala na hametraka ilay vatasarihana fangatahana ..?
Mamaly an'i fdorc
Toa an'i Samsung, angamba, fa fantatsika koa fa mahery ny Google amin'ny fanovana azy .. Arahaba!
Hifarana ny mangalatra Wifi. Ampianarinay anao ny fomba fanapahana ny Wifi amin'ny fitaovana tsy nahazoana alalana
Lenovo Vibe P1, fika manokana ary famafana ny Lenovo misy bateria 5000 mAh